မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ပထမဦးဆုံးအရာငါလိုဟုပြော၊အလိုး၊စည်းကမ်းအဖြစ်၊ အမြင့်၊သူတို့၊စည်းကမ်းအဖြစ်၊ဆံပင်၊အပြာ-မျက်လုံး၊မီးခိုးရောင်မျက်လုံး။ ငါမြင်ကြဖူးဘူးတဲ့အညိုရောင်မျက်လုံးသဏ္ဍာန်အမျိုးသမီး။ ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအသံထွက်အသြင္ကို။ အလွန်အနည်းငယ်ထွား။ ဤအများအပြားကြွက်သားကိန်းဂဏန်းများ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုလ္ဝိ(နိုင်ဟုငါဆို-မသိဘူး)။ ဒါပေမယ့်အတွေ့အရိတ္ဒိန္းနှင့်အတူပါးလွှာတဲ့ခါးနှင့်ကျယ်ပြန့်တင်ပါးပြဿနာလျှင်၊တွေ့ခံရဖို့ရှိပါတယ်သေချာအချို့ရောနှော၏အသွေးကြောင့်အမျိုးမျိုးအပြားပိုပြီးခြောက်သွေ့၊အားကစားသို့မဟုတ်အလွန်ပါးလွှာ၊ဒါမှမဟုတ်အချို့အဆီအတွက်အစာအိမ်ဧရိယာ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်တွင်၊ရှာဖွေရန်ခါးသူတို့ကခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ အဖြစ်အတြက္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊အမျိုးမျိုးအပြားပြားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအကအခုန်၊ချစ်ခြင်း၊တွင်မူအတူတူအချိန်ဖြုန်းဖို့။ သုံးပုံနှစ်ပုံသည်အမျိုးသမီးများ၊နှင့်ဒိန်းယောက်ျား၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တက်တူးနှင့်ငရဲ။ ဒါဟာအတွက်အလွန်ဘုံဒိန္း၊စာသားအချို့၊မသိကြဘူး၊ရောဂါ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်ကြောင်း:သင်ဖြစ်၊ခြောက်ဆယ်နှစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်တက်တူးအပေါ်အသက်ခြောက်ဆယ်နှစ်အရွယ်(ဒါနဲ့ပတ်သက်ငရဲ၊ တက်တူး-ဟုတ္ကဲ့)။ ။ ကောင်း၊အတောင်အားဖြင့်အ၊သူတို့ကြက်သားကင်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးနီးပါးကိုသွား ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ဒိန်းမတ်အလွန်အနည်းငယ်သောနေသာရက်၊အချိန်နှင့်ဖြစ်ကောင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗီတာမင်ချို့တဲ့။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်အလွန်လူကြိုက်များ။ ဆဲမေတ္တာသောက်ရန်? ငါသည်မသိရပါဘူး၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မပြောနိုင်သေးပါဘူးဒိန်းသာမသောက်စပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်သာဘီယာ၊ဒါပေမယ့်ဗော့ဒ်ကာနှင့်အတူဖျော်ရည်သောက်လွန်း။ တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်၊သောက်ကွာရှင်းရဲ့ငါးဆယ်ဂရမ်ဗော့ဒ်ကာအဘယ်သူမျှမအချိုရည်အတွက်သင်တန်း၏၊ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်ကော့တေး၊"ကမ်းခြေပေါ်လိင်"-ဤသည်အားလုံးအလွန်ရေပန်းစား။ အဘယ်အရာကိုပင်မီ-မီ-မီသူတို့မလွန်နာ္ျ၊လိုးဓိကကနိုင်ငံရေးသမား၊နိုင်ငံရေးမဟုတ်နံပါတ်တစ်ကိစ္စ၊မပတ္သက္ပါဘူး။ သူတို့လည်းမဟုတ်၊ဒါကြောင့်သူတို့အ ၊စည်းကမ်းအဖြစ်၊သူတို့ ၊သူတို့ရှိစေခြင်းငှါမိတ်ကိုကြည့်ရှု၊ဒါပေမယ့်အမြဲပြုံးငါ့မျက်နှာပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးအဒိပူနွေးလူ၊ဒီမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အပူ။ တစ်နည်းနည်းနဲ့နောက်ကွယ်မှအချို့မျက်နှာဖုံး ဒီဘမ်း။ မိသားစု-အခြေခံနစ္အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားဗစ်နစ္၊အရိတ္ဒိန္းမိမိမကျူးလွန်ဖို့အပြည့်အဝမိသားစု၊အဘယ်သူမျှမကိုးကွယ်အစားအစာ၏၊အစွန်းရောက်များ၏အလေး။ ကလေးများအလွန်အစောပိုင်းပေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊အတွက်နှစ်ပေါင်း၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ကလေးများနေထိုင်ကြပါဘူးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိဘများ၊သူတို့သွားကြဖို့ဘော်ဒါကျောင်း၊ပြီးတော့စတင်ကောလိပ်၊တက္ကသိုလ်၊အိမ္ခန္း။ ထွေထွေအတွင်း၊တစ်နေရာရာကနေနှစ်ကလေးများအဖို့ကျန်ရစ်နေကြပါတယ်။ မလုပ်လေးများကိုကူညီပါ။ ေျမသားသမီးရဲ့မိဘတွေအတွက်ပိုပြီးရင့်ကျက်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်မိဘများ၏ကလေးများရှိသည်သောသူမှီအသက်အရွယ်အနှစ်မကူညီကြဘူး။ သားသမီးအပေါ်တိုက်ရိုက်အဂျွန်းလုံလောက်ပါတယ်၊နှင့်အတူကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်။ ခြားသောအရာတို့ကိုအကြား၊အဆယ့်နှစ်၌ဒိန်းမတ်၊ကလေးများအားလုံးအလုပ်အချိန်ပိုင်း၊နှင့်ဤစံဒီမှာ။ ဤမားတဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်၊ကလေးများကြားပေးဖို့အလုပ်နှင့်သေချာစေရန်အကြောင်းသူတို့သိထားကြ၏တန်ဖိုးကိုပိုက်ဆံ၊ရန်တတ်နိုင်ကြသည်ငွေစာရင်းများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ဤကိစ်စတှငျ၊အားလုံးနီးပါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဖြစ်လာမလိုမိန်းကလေးများအဘို့နေသောအကြောင်းစဉ်းစားသည့်အလုပ်။ လေ့ကျင့်စုံ-သိပညာစစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်အတော်လေးပြဿနာ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သဘာဝတရား၏ရှက်ကြောက်စိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုံ၌။ အကြံပေးဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ကျနော်တို့ကျိန်းသေကိုတုံ့ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန္းကေလး။ ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်အွန်လိုင်းမြို့၊ကွန်ပျူတာအသေးစားနှင့်မိန်းကလေးများ။ အ စီမံကိန်းကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်အားဖြင့်ရာပေါင်းများစွာ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိအလွန်အဆင်ပြေရာင္းမည့္၏သီချင်းချိန်းတွေ့သင့်အာရုံစိုက်ဖို့ ဖုန္းနံပါတ္။ မည်သို့ပင်အဝိသေသလက္ခဏာများ၏အ အဖွဲ့၊သုံးစွဲသူများ၏အရေအ။ သင်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသတိရကြောင်းသင်မိုဘိုင်းဖုန်း။ မဲ့မိန်းကလေးငယ်များမှတ်ပုံတင်နှင့်ကမ်းလှမ်းအကြံပေးချက်များကယ်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်၏အချိန်ဖြည့်စွက်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကို။ တချိန်တည်းမှာ၊အသည်းအသန်နေသောလူဦး။
တခါကျွန်တော်ရေးအမည္၊သင်တောင်မပေးဖို့ကျွန်မကိုသူစိမ်း။ ဖြစ်စေသင်ကချိုမြိန်၊အၾကိဳက္ဆံုးအတွက်သင်၏နား၊မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဆိသူဂရုမစိုက်ပါဘူး၊အခုတော့ကမ္ဘာကြီးကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနှင့်ပုံမှန်လူတဦးကိုချမှတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုသို့မဟုတ်ပဲတစ်စုံတစ်ဦးကလိုအပ်သူတစ်စည်၊သူပိုက်ဆံလိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်အစစ်အမှန်ယောက်ျားကနေဆိုက်ဘေး
ပြီးတော့သူလိုက်သောခံစားချက်များရှိခဲ့ဖူးဘူးဆိုစစ်သားမူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားအား၊သို့မဟုတ်သူတို့အားလုံးသိမ်းပိုက်။ ရှိလိုလျှင်-ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းမိန်းကလေး၊၊ပြီးတော့စတစ်မိသားစု။ ငါလိုချင်တဲ့နွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်သည်။ ချစ်ပြီးချစ်ရသူဖြစ်။ ငါသည်ဤသိ။။။။ မွတ္ခ်က္မ်ားပီးဆိုးမြင်၊ဒါပေမယ့်ငါရှာဖွေနေများအတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘယ်သူသည်နေချင်စဖွယ်နှင့်အတူအားလုံးငါ့အသက်ကိုနှင့်ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအလိုဆန္ဒဆက်သွယ်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နိုင်ရန်အတွက်သားသမီး။ ကၽြန္ုပ္-အသက်အရွယ်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင် ၊ကြွင်းသောအရာ-ေစာပေးစာ။ ရေးပြီးပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်လူတိုင်း။.
Χρονολόγηση Δανία. Ιστοσελίδα γνωριμιών Δανία δωρεάν, χωρίς εγγραφή, για σοβαρή σχέση
ချိန်းတွေ့ဆိုက် ချက်တင်ကစားတဲ့သင့်ဖုန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ ချိန်းတွေ့ဘို့အဆက်ဆံရေး အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းမိန်းကလေးများ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမပါဘဲ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ချိန်းတွေ့